Coral Reef: ပန်းမျိုးတစ်ထောင်နဲ့ ရွှေရောင်နေ့ရက်များ
shin said on July 17, 2010 at 11:04 PM
ပုဂံခေတ်၊ အင်းဝခေတ်၊ ကုန်းဘောင်ခေတ်၊စစ်ကြိုခေတ်လိုမျိုး ခေတ်အလိုက် ၀တ်စားဆင်ယင်ပြီး ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကိုမှတ်မိသေးတယ်။ အဲဒီပုံကို အတန်းထဲကသူငယ်ချင်းအားလုံးနီးပါးသဘောကျ ကြတယ်။ ကိုယ်တောင်စဉ်းစားမိသေးတယ်။ ဘာလို့ကိုယ်တို့အတန်းကလူကိုမခေါ်ပါလားလို့။ နောက်မှအတန်းကြီးသမားတွေကို ခေါ်မှန်းသိရတယ်။ ကိုယ်တို့အတန်းကြီးလာရင် အဲ့လိုရိုက်ရမှာပါလို့တောင်ဆရာမကပြောသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့နောင်နှစ်တွေမှာအဲ့လိုမရိုက်ဖြစ်တော့ဘူး။
နေကြတ်တုန်းကလဲ တစ်တန်းလုံးဆရာမ အပါအဝင် အတန်းရှေ့မှာသွားကြည့်တာ။ မျက်စိပျက်မှာစိုးလို့ စာရေးရင်ခံရေးတဲ့မှင်ခံပြားနဲ့ ကာကြည့်ကြတာ။ ၆တန်းတုန်းက ဘာမှန်းညာမှန်းမသိဘဲ အချစ်တော်လိုက်ခံရလို့ ထွက်ပြေးရသေးတယ်။ ၉တန်းတုန်းက အကြွေစိသရဲအခေါ်ကောင်းလို့ အတန်းခေါင်းဆောင်ကစပြီးတစ်တန်းလုံးတန်းစီအရိုက်ခံရတာ။ အင်းလွမ်းစရာတွေချည်းဘဲ။
အင်ကြင်းသန့် said on July 18, 2010 at 9:07 AM
မမရေ....အတူတူပဲ ဂျင်းလည်း ဆယ်တန်းတုန်းက မြန်မာစာနဲ့အင်္ဂလိပ်စာကို ဂုဏ်ထူးလိုချင်လို့ အရမ်းကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် မြန်မာစာပဲထွက်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် အရမ်းကျေနပ်တယ်။ တစ်ကျောင်းလုံးမှာမှ နှစ်ယောက်ပဲ ထွက်တာလေ။ ရှစ်တန်းနှစ်ကတည်းက ဂုဏ်ထူးလိုချင်လို့ လက်ရေးလှစာအုပ်တွေဝယ်ပြီး လက်ရေးအလှလေ့ကျင့်ခဲ့တာလေ။ အဲဒီနှစ်မှာမရပဲ ဆယ်တန်းနှစ်ကျမှရတော့ ပျော်လိုက်တာ။
မမရေးထားတဲ့ငယ်ဘ၀တွေကို ဖတ်ပြီး ညီမလေးငယ်ငယ်တုန်းက အကြောင်းတွေတောင် အမှတ်တရပြန်ရေးချင်သွားပြီ...း))
အပြုံးပန်း said on July 18, 2010 at 1:26 PM
ကိုးတန်းဆယ်တန်းအချိန်ဟာ ကိုယ်တို့ရဲ့ ရွှေရောင်နေ့ရက်များပါ၊
ဆရာဝန်၊ အင်ဂျင်နီယာ ဖြစ်ချင်တဲ့ စိတ်စေတနာနဲ့ အိမ်က တဖူးဖူးမူတ်ခံထားရတဲ့ အချိန်တွေ မဟုတ်လား၊ ကလေးနဲ့ အပျိုကြား အရွယ်လည်း ဟုတ်တော့ စိတ်တွေက တမြှောက်မြှောက်ပဲ၊
ကိုလူထွေး said on July 18, 2010 at 2:19 PM
မျက်နှာဖုံးအလှရှင်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံကျော်သွားရင် စာမေးပွဲအတွက် မပြင်ဆင်နိုင်တော့မှာစိုးလို့ ပိုဖြစ်လောက်တယ်...
Shinlay said on July 18, 2010 at 2:20 PM
ငယ်ငယ်က အကြောင်းလေးတွေ ပြန်သတိရစေပါတယ်။
အခုတော့ နေရာ အနှံ့ မှာ အတူတူပြန်ဆုံကြဖို့ 
Rita said on July 18, 2010 at 3:34 PM
အဲဒီလို အချိန်အခါက အကြောင်းအရာလေးတွေကို ဖတ်ရတာ သိပ်ချိုမြိန်တယ်။
နေ၀သန် said on July 18, 2010 at 4:05 PM
ဇွန်မိုးစက်ရဲ့ ငယ်ဘ၀လေးကို ဖတ်ရတာ ပျော်စရာလေး..... မြန်မာစာဂုဏ်ထူးပါတာ တော်တယ်ဗျာ.....း)))))
sonata-cantata said on July 18, 2010 at 7:33 PM
မနေ့ကတင် ကျောင်းတုန်းကအကြောင်း ပြောနေတာ...
၉တန်းတုန်းက ကျောင်းသူသစ်မို့ ဈ - I တန်းမှာ နေရတာလေ...
ဖြည့်ရတဲ့ စာရွက်က Aတန်းကနေ စဖြည့်ပြီး အတန်းစဉ် လက်ဆင့်ကမ်းလာတာလေ...
မသီတာတယောက် ကိုယ့်အတန်းအတွက် ဖြည့်ပြီး ဟိုဘက် J တန်းကို သွားပေးချင်တာ အလွန်...
J တန်း အတန်းပိုင်ဆရာမကို ကြည့်ချင်လို့လေ...
တခါများ သူ့အတန်းက ဖြည့်ပြီးသားကို မသိပဲ သွားပေးမိလို့ J တန်း တတန်းလုံးရဲ့ ၀ိုင်းအဟားခံရတယ်...း)
တီချယ် ဒေါ်WWM ကျန်းမာပါစေ
Anonymous said on July 18, 2010 at 8:36 PM
Ma Ma War is well and fine!
Thanks for your wish!!!!
sonata-cantata said on July 18, 2010 at 9:06 PM
မိုးခါး said on July 27, 2010 at 8:34 AM
လွမ်းစရာနော် အစ်မ :-\_